बजाज चेतकको बुकिङ एकाएक किन भयो रद्ध ? - सिम्रिक खबर
बजाज चेतकको बुकिङ एकाएक किन भयो रद्ध ?
बजाज स्कुटर, फाइल तस्विर
काठमाडौँ । नेपाली बाइक तथा स्कुटर क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखी राज गर्दै आएको बजाजले इलेक्ट्रिक स्कुटर चेतकको बुकिङ रद्ध गरेको छ । स्कुटरको बढ्दो बजारलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले यसअघि बिभिन्न मोडल सार्बजनिक गरेपनि त्यसमा सफल हुन भने सकिरहेकोे थिएन । पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक स्कुटरको माग बढ्दै गएको देखेपछि उसले चेतक नामको इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्बजनिक गरेको थियो । यसै बर्षको जनवरीमा सार्बजनिक गरिएको उक्त स्कुटरमा ग्राहकले अत्याधिक रुची राख्दै आएका छन् ।
एकातिर माग बढ्दै जानु र अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका कारण उत्पादनमा समस्या आएपछि उसले माग अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेको थिएन । अर्कोतर्फ भारत र चीनबिच सिमा बिबादका कारण चिनबाट आयत हुने स्पेयर पार्टसमा समस्या समेत खेप्नु परेको थियो । यी र यस्ता समस्याका कारण अन्तत कम्पनीले यसै महिनाबाट स्कुटरको बुकिङ नलिने घोषणा गरेको हो । स्कुटर सेग्मेन्टमा दमदार कमब्याक गरिरहेको चेतकमा समस्या देखिएपछि यो सेग्मेन्टमा अघि बढ्न कम्पनीलाई फेरी एकपटक अफ्ठेरो पर्ने अनुमान गरिएको नेपालअटोले जनाएको छ ।